Jeôgrafia - Wikipedia
Ny jeôgrafia dia siansa miompana amin' ny fandinihana momba ny Tany ary indrindraindrindra ny momba ireo zava-mitranga ara-pizika, ara-biôlôjia ary momba ny olombelona izay miseho eto amin' ny bolan-tany.
Sarin-tanin' ny Tany
Mizara ho sampana telo lehibe ny jeôgrafia, dia:
ny jeôgrafia matematika izay niseho voalohany, andinihana ny endrika sy ny refin' ny Tany amin' ny alalan' ny jeôdezia;
ny jeôgrafia fizika izay ahitana ireo taranja siantifika mampiditra ny siansan' ny zavaboary;
ny jeôgrafian' ny olombelona izay ahitana ireo taranja siantifika mampidira ireo siansan' ny fiarahamonina.
Noho ny fandrosoan' ny astrônômia sy ny astrônaotika, dia maro ankehitriny ny endrika fantatra amin' ny toerana hafa tsy eto amin' ity planeta ity, ka ny teny hoe jeôgrafia dia ampiasaina amin' ny fandinihana ireo zavatra mitsingevana eny amin' ny lanitra.
2 Fivoarana sy ny sahan' ny jeôgrafia
3.1 Jeôgrafia fahiny
3.2 Vanim-potoana môderina
3.3 Vanim-potoana ankehitriny
3.4 Fiovana lehibe tamin' ny taonjato faha-20
4 Sampana siantifika
4.1 Jeôgrafia matematika
4.2 Jeôgrafia fizika
4.3 Jeôgrafian' ny olombelona
4.3.1 Jeôgrafia ankapobeny
4.4 Saha mifandray aminy
4.5 Planeta hafa
5 Fomba fiasa sy teknika
5.2 Rafitra fampahalalana ara-jeôgrafia
5.3 Fandrefesana lavitra
5.4 Fomba jeôgrafia ara-kabe
6 Vangio koa
Ny teny nogasina hoe jeôgrafia dia avy amin' ny teny grika taloha hoe γεωγραφία / geographia, voafoarona amin' ny hoe η γη / hê gê "ny tany" sy ny hoe γραφειν / graphein "manoritsoritra", avy eo avy amin' ny teny latina hoe geographia, ara-bakiteny "sarin' ny tany").
Fivoarana sy ny sahan' ny jeôgrafiaHanova
Ny olona voalohany nampiasa ny teny hoe "jeôgrafia" dia Eratosthenes (276-194 tal. J.K.) ho an'ny asa very ankehitriny fa ny fahatongavan'ny jeôgrafia dia nomena an'i Herodotus (484-420 tal. J.K.); noheverina ho mpahay tantara voalohany ihany koa. Ho an' ny Grika, dia ny famaritana ara-drariny ny Tany, indrindra fa ny jeôgrafia fiziaka. Izy io dia siansa mamaly ny fahalianana vaovao, ary hamaritra ny geôpôlitika amin'ny alàlan'ny famaritana ny faritany ho resy sy hotazonina, izay midika hoe fanaovana sarintany. Ho an'i Strabo , ny jeôgrafia no fototry ny fanofanana ireo izay te hanapa-kevitra.
Fomban-drazana ara-tantara efatra amin'ny fikarohana ara-jeôgrafia dia ny famakafakana spatial ny zava-miseho voajanahary sy maha-olombelona (jeôgrafia ho fandalinana ny fizaran'ny zavamananaina), fandalinana faritany (toerana sy faritra), fandalinana ny fifandraisan'ny olombelona sy ny tontolo iainany, ary fikarohana momba ny siansa momba ny tany.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fikarohana siantifika, sehatra ara-jeografia maromaro no nivoatra ho satan'ny siansa amin'ny zony manokana. Anisan'izany ny klimatôlôjia, ny ôseanôgrafia, ny kartôgrafia, sns izay nisy fiantraikany tamin'ny fifantohana indrindra amin'ny asan'ny jeôgrafia amin'ny fifandraisan'ny olombelona (lafin'ny sôsialy) sy ny fifandraisany amin'ny tontolo iainany (endrika araka erana). Ny jeôgrafia fizika sy matematika no sampan'ny jeôgrafia izay nandalo indrindra tamin'ity fivoaran'ny siansa ity, raha nanararaotra izany fiovana izany ny jeôgrafian' ny olombelona mba hialana amin'ny jeôpôlitika mankany amin'ny fandalinana ara-drariny sy manankarena kokoa momba ny fifandraisan'ny olombelona sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tontolo iainany amin'ny alàlan'ny taranja vaovao.
Na izany aza, ny jeôgrafia môderina dia fitsipi-pifehezana mahafaoka ny zava-drehetra izay mikatsaka ny hahatakatra bebe kokoa ny planetantsika sy ny maha-olombelona sy ny zavaboary rehetra, tsy ny toerana misy ny zavatra ihany, amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny sarintany, fa ny fomba niova sy nahatonga azy ireo. ho. Efa hatry ny ela ny mpahay jeôgrafia no nihevitra ny fifehezany ho toy ny fitsipi-pifehezan-dalana (Jacqueline Bonnamour), "tetezana eo amin'ny siansa olombelona sy ara-batana" . Ny fomba fijery ara-jeôgrafia amin'ny tranga iray dia tsy voafetra amin'ny fampiasana kartôgrafia (fandalinana sarintany). Ny grid fanontaniana, mifandray amin'ny kartôgrafia, dia ahafahana manitsy ny famakafakana ny zavatra - ny habaka - sy nyeto fa tsy any an-kafa. Mihatra àry ny jeôgrafia hamaritana ny antony, na voajanahary na olombelona; ary rehefa hitany ny tsy fitoviana dia ny vokany.
Amin'izao fotoana izao, ny fizarana ny jeôgrafia ho sampana roa lehibe dia nametraka ny tenany amin'ny fampiharana, jeôgrafian'ny olombelona sy jeôgrafia fizika. Na izany aza, ny jeôgrafia dia mijanona ho ambony indrindra amin'ny fitsipi-pifehezana synthesis izay mametra-panontaniana ny "ireo soritra" navelan'ny fiaraha-monina (fandrosoan'ny habaka na fiantraikany) na ny natiora (fiforonan' ny tendrombohitra, ny fiantraikan'ny toetrandro, sns.) ary ny dinamika eo amin'ny asa. (fipoahana ara-sôsiô-ekônômika amin'ny fasan'ny Aziatika milamina, famotsorana tsikelikely ny firenena ara-toekarena mandroso) ary ao anatin'ny tontolo fizika (" Fiovana eran-tany », Fiakaran’ny ranomasina…). Ny jeôgrafia noho izany dia samy liana amin'ny lova (fizika na olombelona) sy ny dinamika (demôgrafika, ara-tsôsialy, kolontsaina, toetrandro, sns.) misy eo amin'ny habaka.
Fanampin'izany, ity taranja ity dia mirona amin'ny fampidirana ireo sehatra kolontsaina isan-karazany toy ny sary hosodoko momba ny tontolo iainana, ilay tantara na sinemà.
Ao amin'ny faritra mediteraneana, ny jeôgrafia dia natao tamin'ny fandrefesana andrana sy fitantarana momba ny dia sy ny toerana hitanisana izao rehetra izao. Ny sarintany sy ny fikarohana dia tena asan'ny manam-pahaizana momba ny tontolo grika. Araka izany, i Claude Ptolémée dia mitanisa an’izao rehetra izao rehetra fantatra ao amin’ny bokiny hoe Jeografia. Anaximander dia manao ny iray amin'ireo sarintany voalohany amin'ny tontolo fantatra.
Ny Grika no sivilizasiôna voalohany fantatra fa nianatra momba ny jeôgrafia, na siansa na filôzôfia. Thales of Mileto , Herodotus (mpanoratra ny chorography voalohany ), Eratosthenes (sarintany voalohany amin'ny tontolo fantatra - ny ecumene -, kajy ny faribolana manodidina ny tany), Hipparchus, Aristote, Ptolémée dia nandray anjara lehibe tamin'ny fifehezana. Nitondra teknika vaovao ny Rômana rehefa nanao sarintany ireo faritra vaovao.
Ireo mpialoha lalana ireo dia namolavola sampana jeoôgrafia efatra izay haharitra hatramin'ny Renaissance :
mamantatra sy mandinika ireo kôntinenta;
mandrefy ny habaky ny Tany (jeôdezia);
mametraka ny Tany amin'ny rafitra astrônômika (kôsmôgrafia);
maneho ny habaky ny Tany (kartôgrafia).
Taorian'ny Renaissance sy ny zava-baovao lehibe , ny jeôgrafia dia nametraka ny tenany ho fifehezana amin'ny zony manokana amin'ny sehatry ny siansa.
I Nicolas Copernicus dia namolavola ny heliôsantrisma izay milaza fa ny Masoandro no ivon' izao rehetra izao ary ny Tany dia mihodina manodidina ny Masoandro. Namoaka sarintanin' izao tontolo izao tamin'ny taona 1569 i Gérard Mercator tamin'ny taratasy valo ambin'ny folo antsoina hoe "Mercator projection" izay nanomezan'ny mpandeha an-tsambo ny tena filazalazana momba ny sisin-tany.
Teo anelanelan'ny taonjato faga-19 sy faha-20, hampitombo ny onja maro miezaka ny hampiseho ny fifandraisana eo amin'ny olombelona sy zavaboaey, bebe kokoa na latsaka fahombiazana sy fatratra ny fomba fiasa:
ny riandrano voafaritra, tarihin'ilay mpahay jeôgrafia alemà Carl Ritter . Ny determinisma dia mihevitra fa ny antony voajanahary dia miteraka vokatra ara-tsôsialy;
ny riandrano mpiaro ny tontolo iainana, novolavolain'ilay mpahay jeôgrafia alemà Friedrich Ratzel . Ny zavamananaina tsirairay dia vokatry ny tontolo iainana misy azy;
ny mety ho an'i Vidal de La Blache izay mikatsaka ny hahafeno fepetra amin'ireo fomba fiasa teo aloha. Tsy misy famaritana ara-jeôgrafia, fa ny fahafahan'ny olona misafidy, na tsia, hampiasaina. Natiora no manolotra, ny olombelona no manary.
Ny Sekoly Frantsay momba ny Jeôgrafia, noforonin'i Paul Vidal de La Blache, dia mamolavola endri-javatra manokana ihany koa: jeôgrafiam-paritra. Fanontaniana amin'ny fiatrehana ny tsy manam-paharoa, miaraka amin'ny faritra ("idiôgrafia" na miasa amin'ny zavatra manokana), noho izany dia misoroka ny fiviliana nômôtetika, fa tafiditra ao anatin'ny fahalalana miendrika rakipahalalana.
I Élisée Reclus no mpanoratra ny rakipahalalana (ny Jeôgrafia Maneran-tany Vaovao, amin'ny boky 19). Ny fomba fijeriny ara-jeôgrafia dia nisy fiantraikany tamin'ny faharesen-dahatra anarsista .
Fiovana lehibe tamin' ny taonjato faha-20Hanova
Ny vaovao avy jeôgrafia nitombo ny taona 1960 ao amin'ny Etazonia sy niely tamin'ny Frantsa, Soisa ary indrindra Alemaina ao amin'ny taona 1970 . Misy fiantraikany mivantana amin'ny jeografia anglô-saksôna sy skandinaviana izy io. Aingam-panahy avy amin'ny matematika (statistika) sy ny fitsipiky ny toekarena, ity jeôgrafia ity dia manandrana mametraka "lalàna" manerantany (siansa nômôtetika).
Amin'ny famoronana fahalalana maro isan-karazany, ny jeôgrafia dia manome ny fanalahidin'ny famakiana sy famakafakana ireo olana lehibe amin'izao fotoana izao mampifandray ny habaka sy ny fiarahamonina. Izy io dia mikendry ny mpihaino isan-karazany: mpanao pôlitika, haino aman-jery, mpahay siansa, ary koa ny fiaraha-monina iray manontolo. Amin'izao tontolo misy antsika miha-manatontolo izao, io fitsipi-pifehezana io dia manome fahafahana manokana ny fisamborana amin'ny fomba maro sy mitsikera ny fikorianan'ny entana, ny vaovao ary ny olona mba hamahana ireo fanamby ateraky ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny tanàn-dehibe, na ny fifindra-monina ary ny ady mitam-piadiana. Ny jeôgrafia noho izany dia fitaovana ho an'ny fahaiza-manao sy fanabeazana momba ireo olana ireo, izay ahafahana miasa amin'ny sehatra eo an-toerana, nasiônaly ary manerantany.
Ny jeôgrafia matematika dia mifantoka amin'ny velaran'ny Tany, ny fandalinana ny fanehoana matematika ary ny fifandraisany amin'ny volana sy ny masoandro. Io no endrika voalohany amin'ny siansa ara-jeografika niseho tamin'ny andron'i Gresy fahiny ary ankehitriny dia ahitana ireto taranja siantifika sy teknika manaraka ireto:
ny jeôdezia, ny siansa izay mifantoka amin'ny fandalinana ny bika sy ny fandrefesana ny haben'ny tany;
ny fanaovana sarin-tany, fampiharana ary fandalinana ny sarintany. Ny fitsipika lehibe amin'ny kartôgrafia dia ny fanehoana ny angon-drakitra amin'ny haino aman-jery ahena mampiseho toerana tena izy;
ny jeôgrafia astrônômika ;
vao haingana ny jeômatika dia nanamboatra sampana jeôgrafia izay tsy mitovy amin'ny teo aloha tamin'ny fampiasana fitaovana infôrmatika handinihana ny faritany. Izy io dia mameno ny rafitra fampahalalam-baovao novolavolaina any an-toeran-kafa amin'ny taranja hafa amin'ny alàlan'ny references spatial: toerana ara-jeôgrafia, izay voafaritra matetika amin'ny rafi-pandrindra ara-jeôgrafia (X, Y, Z). Avahana araka izany ny rafitra fampahalalam-baovao ara-jeôgrafia sy ny fandrefesana lavitra amin'ny zanabolana ;
ny famakafakana spatial izay mandrakotra fitaovana maromaro nefa koa foto-kevitra amin'ny famolavolan'ny rafitry ny habakabaka sy ny famakafakana ny fiaraha-monina amin'ny refin'ny habakabaka;
ny fôtôgrametria, hamaritana ny refy sy ny haben'ny zavatra avy amin'ny fandrefesana amin'ny sary mampiseho ny fomba fijerin'ireo zavatra ireo;
Ny jeôgrafia fizika dia taranja izay mikendry ny "milaza, mampitaha ary manazava ny tontolo iainana". Izy io dia voalamina amin'ny sehatra manokana: jeômôrfôlôjia (ara-drafitra sy ara-ketsika), klimatôlôjia, hidrôlôjia, biôjeôgrafia ary paleôjeôgrafia. Ireo taranja ireo dia mandray anjara amin'ny famakafakana ny tontolo iainana voajanahary, izay lazaina matetika amin'izao fotoana izao, landscapes , izay jeôsistema : vondrona ara-jeôgrafia manana ny rafitra sy ny asany manokana, izay voasoratra ao amin'ny habaka sy ny fotoana. Ny geôsistema dia ahitana singa abiôtika, biôtika ary antrôpôjenika izay mifandray:
Ireo singa abiôtika ("tsy misy aina", anton-javatra ara-tontolo iainana ankoatry ny an'ny velona) dia mifandray amin'ny:
ny litôsfera (vato);
ary ny atmôsfera , mamaritra ny toetrandro . Ny toetr'andro miseho amin'ny hetsika ny rivotra vahoaka fa koa amin'ny be vato tontolo alalan'ny meteoric mpiasa izay mandray anjara amin'ny tany ny toetr'andro, amin'ny weathering dingana (fanovana mitranga ao amin'ny vatolampy eo ambany vokatry ny rivotra trangan-javatra);
ary farany, ny hidrôsfera (ny rano), ny fianarana ankapobeny dia ny sehatry ny hidrôlôjia izay mizara ho hidrôlôjia an-tanibe sy hidrôlôjia an-dranomasina (na ôseanôgrafia). Ny hidrôlôjia dia mahakasika ny fandalinana ny fitsinjarana ny rano (jereo ny tamba-jotra hidrôlôjika). Ao amin'ny tontolo voajanahary, ny rano dia tsy momba ny rano atmôsfera, renirano, farihy, ranomasina sy ranomasimbe, ary ny ranomandry - ny rano dia tsy maintsy raisina amin'ny endriny telo - fa ny rano ao anatiny ihany koa, ny litôsfera.
ny singa biôtika (bios, aina) asehon'ny biôsfera (zavamaniry amin'ny alàlan'ny fitôjeôgrafia sy ny biby ao anatin'izany ny biby amin'ny tany amin'ny pedôfaona);
ny singa antrôpôjenika (anthropos, olombelona). Ny fandalinana ny jeôsistema amin'izao fotoana izao dia miavaka amin'ny fiheverana bebe kokoa momba ny antrôpizatiôna, ary koa ny fanamafisana ny evôlisiôna amin'ny fotoana.
Ohatra, ny jeômôrfôlôjia dia mamakafaka ny iray amin'ireo singa ao amin'ny tontolo voajanahary, mifandray akaiky amin'ireo taranja hafa momba ny jeôgrafia fizika sy ny siansa momba ny tany (jeôlôjia). Ny jeômôrfôlôjia ara-drafitra dia azo avahana izay mifanitsy amin'ny fanamaivanana ny fanehoana mivantana ny rafitra, avy amin'ny jeômôrfôlôjia ara-ketsika (na klimatika mihitsy aza) izay mifandray amin'ny fihetsiky ny toetr'andro manokana ny endriny. Ity taranja ity dia ampifandraisina amin'ny famakafakana ny tontolo iainana manontolo ao anatin'ny rafitry ny tetikasa fampandrosoana na ny fiarovana ny tontolo iainana voajanahary.
Ny tena zava-dehibe amin'ny jeôgrafia fizika dia ny tontolo iainana. Izy io dia sampana jeografia izay nanjaka hatramin'ny taona 1950-1970 tamin'ny alàlan'ny jeômôrfôlôjia, indrindra ny rafitra, ary noho izany ny fifehezana manontolo. Ny fandalinana ny jeôgrafia ara-fizika sy ny tontolo iainana no fototry ny fandalinana ny jeôgrafia ho an'ny rain'ny jeôgrafia frantsay, Paul Vidal de La Blache. Mba hahatakarana ny fandaminan’ny fiaraha-monin’olombelona, ​​dia nilaina ny nanadihady ny tontolo nisy ny olona. Ilay mpahay tantara Lucien Febvre dia nahafeno fepetra ity fomba fiasa pôsibilista ity, "Ny natiora mizara ny karatra, ny olona no mandray anjara" (J.-P. Alix, L'Espace Humain ) (pôsibilisma). Ny fivoaran'ny epistemôlôjia tamin'ny taona 1960 dia nalemy mafy ny jeôgrafia fizika, ireo jeôgrafa toa an'i Yves Lacoste dia nanakiana mafy ny fihazonana ny jeôgrafia fizika ho toy ny singa manazava ny fikambanan'ny fiarahamonin'olombelona (determinisma).
Niova be ny jeôgrafia fizika ankehitriny. Lasa liana amin'ny andraikitry ny ololna amin'ny fiovan'ny tontolo iainany izy. Anisan'ny foto-kevitra be mpampiasa indrindra isika dia mahita anthropization (jereo ohatra ny tombony sy ny teritery amin'ny asan'i J.-P. Marchand, University of Bretagne, momba ny toetr'andro any Irlandy).
Ny toeran'ny jeôgrafia fizika no lohahevitry ny adihevitra ao anatin'ny jeôgrafia. Misy mihevitra ny jeôgrafia fizika ho toy ny siansa momba ny natiora, ny hafa toa an'i J.-P. Marchand dia milaza hoe: "jeôgrafia fizika, siansa sôsialy". Ny firaisan'ny fifehezana dia matetika mampametra-panontaniana noho ny antony roa. Ny jeôgrafia sy ny fizika sasany dia nanakaiky be ny sampana fikarohana momba ny siansa momba ny tontolo iainana. Ny jeôgrafian' ny olombelona sasany dia mandà amin'ny anaran'ny determinisma ny fanazavana ara-pizika momba ny fandaminana ny habaky ny olombelona.
Ny jeôgrafia fizika sasany dia mampiditra ny foto-kevitry ny jeôgrafian' ny olombelona sy ny siansa sôsialy. Miangavy izy ireo mba hamelomana indray ny jeôgrafia ara-batana indraindray antsoina hoe jeôgrafian' ny tontolo iainana. Ohatra amin'izany ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana maharitra. Yvette Veyret amin'ny jeômôrfôlôjia, Martine Tabaud ao amin'ny klimatôlôjia ary i Paul Arnoud ao amin'ny biôgeôgrafia dia manandrana mampifanaraka ny jeôgrafia fizika sy ny jeografian' ny olombelona amin'ny fampifangaroana ny fandalinana ny tontolo iainana, amin'ny fiheverana ireo mpilalao sy ny fivoarana ara-jeôpôlitika.
Jeôgrafian' ny olombelonaHanova
Ny jeôgrafian'ny olombelona dia fandalinana ny asan'ny olombelona amin' ny erana ety ambonin'ny tany, noho izany ny fandalinana ny oikumene, izany hoe ny faritra onenan'ny olombelona. Ny famakafakana ny jeôgrafian'ny olombelona dia natao tamin'izany fotoana izany tamin'ny alàlan'ny prisma amin'ny hakitroky: nikatsaka ny hahatakatra ny safidy izay mitarika ny olona amin'ny fisafidianana ny toerana halehany. Ny oniversite jeôgrafia tany am-boalohany tamin' ny taonjato faha-20 dia manamafy ny lanjan'ny tantara. Amin'ity fomba ity, ny fifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary amin'ny alàlan'ny fahalalana azy sy ny tantarany manokana dia mitarika amin'ny fanavahana ny fiaraha-monina sy ny faritra araka ny karazana fiainany.
Ny jeôgrafian'ny olombelona no fiandohan'ny taonjato faha-20 ny mahantra fifandraisana ny famaizana. Tahaka ny jeografia ara-batana, indrindra indrindra dia fitsipi-pifehezana tena mamaritra sy tsy dia mandalina loatra. Tamin'ny taona 1920-1930, nisy fomba fijery ara-toekarena momba ny jeôgrafia olombelona nivoatra manodidina an'i Albert Demangeon, akaikin'ny sekoly Annales. Saingy, ny jeôgrafia isam-paritra hatrany no manjaka mandritra io vanim-potoana io. Tamin'ny taona 1960, dia nivoatra ny jeôgrafia vaovao, na ny famakafakana ny habakabaka, izay nanana faniriana hamantatra ireo lalàna manerantany momba ny fandaminana ny habakabaka ataon'ny olombelona. Ity fomba fijery pôzitivista ity dia hihazona toerana misongadina amin'ny fironana ara-jeôgrafia. Ny jeôgrafian' ny olombelona dia nohavaozina tamin'ny faran'ny taona 1970 nataon'i Yves Lacoste, mpamorona sy mpanorina ny famerenana Hérodote tamin'ny 1976 (mitondra ny lohateny voalohany Strategies geographies ideologies , avy eo tamin'ny 1983 Revue de géographie et de géopolitique ) ary mpanoratra ny lahatsoratra Jeôgrafia, izy io no tena ampiasaina amin'ny ady . Avy eo izy dia mamerina ny fomba fiasa ara-politika momba ny jeôgrafia, siansa izay inoany fa azo ampiasaina amin'ny tombontsoan'ny ampahorina .
Ny ampahany sasany amin'ny jeôgrafia dia mandà tanteraka ny jeôgrafia fizika amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny jeôgrafia ho toy ny siansa sôsialy, ity fahitana ity dia nampitaina tao amin'ny diary Espace-Temps naorin'i Jacques Lévy sy Christian Grataloup tamin'ny 1975.
Amin'izao fotoana izao, ny jeôpôlitika dia mirona hamakafaka ny vokatry ny fanatontoloana (jeôekônômika) sy ny fitantanana ny harena voajanahary (volamena; volamena manga - rano; volamena mainty - solitany; volamena maitso - ny ala ) no zavatra tena ianaran'ny jeôgrafia olombelona. Ny jeôgrafian' ny olombelona koa dia nohamafisina tamin'ny fomba fiasa ara-kolontsaina (ny jeôgrafia ara-kolontsaina dia mandalina ny fanao sy ny fomba fiainan'ny mponina. Ny jeôgrafian'ny lahy sy ny vavy, mpandova ny pôstmôdernisma ary ny sampana zana-jeôgrafia ara-kolontsaina dia nivoatra tao Frantsa hatramin'ny faran'ny taona 1990 .
Ny jeôgrafiam-paritra dia fikarohana ara-jeôgrafia amin'izao fotoana izao mba hizarana ny habaka ho faritra. Ny dingana voalohany amin'ity dingana ity noho izany dia ny fanakambanana miaraka amin'ity anarana ity ireo toerana misy ny taharo ranoray iray. Avy eo, afaka milaza isika hoe ahoana no maha-olona ara-jeôgrafia ity faritra ity, ny maha-samihafa azy amin'ny faritra hafa. Nanomboka tamin'ny taona 1950 tany amin'ny tontolo anglô-saksôna, avy eo niaraka tamin'ny fahatarana folo na roapolo taona tany Frantsa, dia voatsikera mafy ny paradigma ao amin'ny faritra, indrindra ny manodidina ny gazetiboky L'Espace Géographique. Raha heverina ho efa lany andro ny fomba fiasa isam-paritra, dia noho ny korontana maneran-tany toy ny revolisiona fitaterana na fanatontoloana izany. Ireo fanakianana ireo dia hampiroborobo ny fipoiran'ny rivo-piainana te ho ara-tsiansa sy tanjona kokoa: ny sekolin'ny famakafakana habakabaka .
Hatramin'ny taona 1970 sy 1980 , ny jeôgrafia dia nahita ny fivoaran'ny sampana vaovao amin'ny taranja mifanaraka amin'ny fomba fiasa isan-karazany (indrindra ny fampiasana fitaovana avy amin'ny toekarena, matematika, siansa pôlitika, sôsiôlôjia ary siansa infôrmatika), nentanin'ny Skandinaviana, Amerika Avaratra ary ny jeôgrafia anglisy, indrindra amin'ny alàlan'ny fomba fiasa isan-karazany.
Saha mifandray aminyHanova
Ny fandinigana ny toekarena an-kabaka dia faritra eo amin'ny sisin-tanin'ny jeôgrafia ara - toekarena sy mikrôekônômia. Mandalina fanontaniana momba ny toerana ara-toekarena, ary ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny eran-tany (fanatontoloana) sy ny eo an-toerana (fandrindrana isam-paritra, ivon'ny fahaiza-manao, famindrana toerana , sns.).
Tena ilaina amin'ny jeôgrafia ny hevitry ny mari-pamantarana - na fomba fiasa multiscalar: miankina amin'ny hoe mandinika ny planeta manontolo (kely) ny jeôgrafia na ampahany amin'izany fotsiny (lehibe), dia miresaka jeôgrafia ankapobeny na jeôgrafia isam-paritra isika . Amin'izao fotoana izao anefa dia aleo miresaka jeôgrafia ara-dohahevitra toy izay jeôgrafia ankapobeny sy jeôgrafian'ny faritany fa tsy jeôgrafia isam-paritra.
Talohan'ny taona 1970, ny astrônômia dia siansa hafa tanteraka. Hatramin'ny fikarohana ny habakabaka, ny jeôgrafia koa dia ny fandalinana ny toetran'ny zavatra mitsingevana eny amin' ny lanitra rehetra; tsy nisy teny manokana noforonina ho an'ny tsirairay. Koa satria manomboka fantatra ny endrik'izy ireo, io fomba fiasa io ihany no mitarika ny fandalinana.
Ny selenôgrafia ihany no toa ampiasaina. Ny teny hoe areôgrafia ho an'i Marsa, ohatra, dia natolotra, saingy tsy dia nahomby loatra.
Fomba fiasa sy teknikaHanova
Ny jeôgrafia dia mitaky fahaizana mamantatra ny faritra samihafa amin'ny tany mifandray amin'ny tsirairay. Mba hanaovana izany, teknika maro no novolavolaina nandritra ny tantara. Nandritra ny fotoana ela Ny jeografia dia nametraka fanontaniana lehibe efatra tamin'ny tenany rehefa nijery ny Tany izy ireo, ka tafiditra ao anatin'ny dingan'ny famaritana sy famakafakana:
Iza: ny tsirairay sy ny fiarahamonina dia mamokatra ny habakany miaraka amin'ny soatoaviny sy ny fomba fiainany;
Inona: ny fiantraikan'ireo lehilahy ireo, na ara-toekarena, na ara-tsosialy, na ara-tontolo iainana, vokatry ny andrim-panjakana misy azy, ny fikarohana, ny teknika, ny fifanakalozana na koa ny fitrandrahana ny harena voajanahary ;
Aiza: ny toeran'ireo asan'olombelona ireo; amin'ny ankapobeny ny anton'ireo toerana;
Rahoviana: ny vanim-potoana ara-tantara izay ahafahan'ny olona na fiaraha-monina mamokatra habaka manampy na mifaninana amin'ireo teo aloha.
Satria ny fifandraisan'ny habakabaka no fanalahidin'ity siansa sinôptika ity, ny sarintany dia fitaovana lehibe. Ny sariitatra klasika dia nanatevin-daharana ny fomba maoderina kokoa amin'ny famakafakana ara-jeografika, rafitra fampahalalam-baovao ara-jeôgrafia infôrmatika.
Amin'ny fandalinany, ny jeôgrafia dia mampiasa fomba efatra mifamatotra:
Sistematika - Manangona fahalalana ara-jeôgrafia ho sokajy azo trandrahana maneran-tany.
Am-paritra - Manadihady ny fifandraisana mirindra eo amin'ny sokajy ho an'ny faritra na toerana manokana eto amin'ny planeta.
Manoritsoritra - Tondroina fotsiny ny toerana misy ny endri-javatra sy ny mponina.
Analitika - Manontany ny antony ahitantsika toetra sy mponina ao amin'ny faritra ara-jeôgrafia manokana.
Ny kartôgrafia dia mandalina ny fanehoana ny etỳ ambonin'ny tany sy ny asan'ny olombelona. Na dia miantehitra amin'ny sarin-tany aza ny zana-pahaizana hafa momba ny jeôgrafia mba hanehoana ny famakafakany, ny fanaovana sarin-tany dia tsy misy dikany loatra ka azo heverina ho mitokana. Ny kartôgrafia dia nivoatra avy amin'ny fanangonana teknika fandrafetana ho lasa siansa tena izy.
Mila mianatra psikôlôjia ara-tsaina sy ergônômika ny mpanao kartôgrafia mba hahatakarana hoe iza amin'ireo marika no mampita vaovao momba ny Tany amin'ny fomba mahomby indrindra, ary ny psikôlôjia momba ny fitondran-tena mba hampidirana ny mpamaky sarin-tany handray andraikitra amin'ny fampahalalana. Tsy maintsy mianatra jeôdezia sy matematika ampy izy ireo mba hahatakarana ny fiantraikan'ny endriky ny Tany amin'ny fanodinkodinan'ny sarin-tsarintany apetraka eo amin'ny tany fisaka hojerena. Azo lazaina, tsy misy resabe loatra, fa ny kartôgrafia no voa nitomboan'ny sehatry ny jeôgrafia lehibe kokoa.
Rafitra fampahalalana ara-jeôgrafiaHanova
Ny rafitra fampahalalam-baovao ara-jeôgrafia dia rafitra fampahalalam-baovao afaka mandamina sy manolotra angon-drakitra alfanomerikan' ny habakabaka, ary koa mamokatra drafitra sy sarintany. Ny fampiasana azy dia mandrakotra ny hetsika ara-jeômatika amin'ny fanodinana sy fizarana vaovao ara-jeôgrafia. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny lafiny roa ny fanehoana, fa ny fanaovana 3D na sary mihetsika mampiseho fiovaovana ara-potoana eo amin'ny fari-tany iray dia azo atao, ao anatin' izany ny fitaovana, ny tsy azo tsapain-tanana sy ny idealy, ny mpilalao, ny zavatra ary ny tontolo iainana, ny habaka sy ny habaka.
Ny fampiasana amin'izao fotoana izao ny rafitra fampahalalam-baovao ara-jeôgrafia dia ny fanehoana tena misy na tsy dia misy dikany loatra amin'ny tontolo iainana mifototra amin'ny primitiva jeômetrika: teboka, tsilo, marolafy na meshes (raster). Ireo primitiva ireo dia mifandray amin'ny fampahalalana momba ny toetra toy ny natiora (lalana, lalamby, ala, sns.) na fampahalalana hafa mifandraika amin'ny toe-javatra (isan'ny mponina, karazana na faritra amin'ny kaominina, ohatra). Ny sehatry ny maha-mpikambana amin'ireo karazana rafi-pampahalalam-baovao ireo dia ny an'ny siansa momba ny vaovao ara-jeôgrafia.
Ny fandrefesana lavitra dia midika, amin'ny heviny malalaka indrindra, fandrefesana na fahazoana vaovao momba ny zavatra iray na tranga iray, amin'ny alalan'ny fitaovana fandrefesana tsy misy fifandraisana amin'ilay zavatra nodinihina. Izany dia ny fampiasana lavitra ny karazana fitaovana rehetra (ohatra, fiaramanidina, sambon-danitra, zanabolana na sambo ) mamela ny fahazoana vaovao momba ny tontolo iainana. Ny fitaovana toy ny fakan-tsary, lazera, radara, sônara, sismôgrafy na gravimetatra dia matetika ampiasaina. Ny fandrefesana lavitr'ezaka maoderina matetika dia mampiditra fanodinana nomerika, saingy afaka mampiasa fomba tsy nomerika ihany koa.
Fomba jeôgrafia ara-kabeHanova
Ny jeôstatistika dia fitsipi-pifehezana eo amin'ny sisintany misy ny matematika sy ny siansa momba ny tany . Ny sehatry ny fampiasana azy ara-tantara dia ny fanombanana ny tahiry mineraly, saingy midadasika kokoa ny sehatry ny fampiharana azy ankehitriny ary azo ianarana amin'ny alàlan'ny geostatistika ny trangan-javatra spatialized rehetra.
Famakafakana ny angona ara-jeôgrafia: ny jeôgrafia, ny drafitry ny tanàna ary ny mpanentana dia mihamaro mampiasa tabilao angona lehibe omen'ny fanisam-bahoaka na fanadihadiana. Ireo tabilao ireo dia misy angon-drakitra amin'ny antsipiriany be loatra ka ilaina ny fomba hanesorana ny fampahalalana fototra avy amin'izy ireo. Izany no andraikitry ny famakafakana multivariate (antsoina koa hoe, amin'ny endriny isan-karazany: famakafakana angon-drakitra, famakafakana anton-javatra na famakafakana taratasim-pifandraisana na antontan' isa marobe ). Tafiditra ao anatin'izany ny fanovàna ny latabatra angona ho lasa matrice mifamatotra amin'ny fari-pahalalana mba hanesorana ny eigenvectors (na anton-javatra na singa fototra ) ary hamokatra fiovana miovaova.
Tombontsoa voalohany: ny fanisam-bahoaka sasany (vidin'ny tany, fidiram-bola, hofan-trano, sns) dia hosoloina singa tokana izay hamintinana azy ireo amin'ny fanoherana ny tokantrano manankarena amin'ny tokantrano mahantra ao an-tanàna. Raha tokony hanao sari-tany miverimberina maromaro, dia sarintany anton-javatra maneho ny rafitra ara-tsôsialy no hanome vaovao synthetic. Tombontsoa faharoa, ny traikefa dia mampiseho fa ny mpanohitra mpanankarena / mahantra no mandrafitra ny vaovao fototra omen'ny fanisam-bahoaka any amin'ireo tanàn-dehibe rehetra nodinihina eran-tany. Ny sarintany rehetra maneho ny angona ara-tsosialy sy ara-toekarena dia hamerina io rafitra io. Fa matetika dia misy tranga hafa mahaliana (fanohitra tanora / antitra, misotro ronono / miasa, manodidina / manodidina vao haingana misy tanàna tranainy, foko foko, sns) izay hafenin'ity tranga manjaka ity. Ny famakafakana multivariate dia mamokatra varimbazaha vaovao izay orthogonal amin'ny fananganana, izany hoe tsy miankina. Araka izany, ny lafin-javatra tsirairay dia haneho trangam-piarahamonina samihafa. Ny famakafakana dia hamantatra ny rafitra miafina ao ambanin'ny variables.
Ireo fomba ireo dia tena mahery, ilaina nefa manolotra fandrika maro ihany koa. Ny endrika samihafa amin'ny famakafakana multivariate dia ampiasaina, miankina amin'ny metrika nofidiana (amin'ny ankapobeny, ny metrika Euclidean mahazatra na Chi-square, jereo ny fitsapana χ²), miankina amin'ny fisiana na tsy fisian'ny fihodinana, miankina amin'ny fampiasana ny "commonalities", ary toy izany koa. Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana ordinatera matanjaka sy rindrambaiko statistika be mpampiasa dia mahatonga ity karazana fanadihadiana ity ho mahazatra, izay mampitombo ny mety hisian'ny fahadisoana .
Ny etnôgrafia dia ny siansa momba ny antrôpôlôjia izay ny tanjona dia ny fandalinana famaritana sy famakafakana eo amin'ny sehatry ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao manokana. Ity fandalinana ity dia natao ho an'ny mponina antsoina hoe "primitiva" taloha.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeôgrafia&oldid=1041559"
Dernière modification le 16 Desambra 2021, à 09:58
Voaova farany tamin'ny 16 Desambra 2021 amin'ny 09:58 ity pejy ity.